Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Fianarana mialoha ny fampisehoana maimaimpoana ao amin'ny IMEX America
Mpitsabo aretin-tsaina voaofana Harvard, mpitarika maharitra amin'ny faharetana, tompon-daka amin'ny famolavolana hetsika, manam-pahaizana momba ny fitondran-tena olombelona ary mpikaroka tany anaty ala tsy mataho-tody no mitarika ny fampianarana amin'ny Alatsinainy Smart, izay ampiasain'ny MPI.
Vaovao ho an'ny 2021 dia andian-dahatsoratra "Headliners", mpandahateny miavaka rehetra ao an-tsahan'izy ireo.
Ny fianarana mialoha ny fampisehoana dia ahitana ny Forum Executive Executive, ny Association Leadership Forum, ary ny Means Business.
Fotoam-pivoriana natokana ho an'ny vondrona indostrialy isan-karazany dia ahafahan'ny mpanatrika manokana ny traikefany tamin'ny Alatsinainy Smart.
Misy ny fandaharam-potoana mifantoka amin'ny ho avy amin'ny alatsinainy Smart - andro iray ianarana maimaimpoana amin'ny 8 Novambra, tanterahina alohan'ny hanombohan'ny IMEX America ny 9-11 Novambra any Mandalay Bay, Las Vegas.
Ny dokotera, mpanoratra ary mpandraharaha sosialy manerantany, Dr. Shimi Kang, dia nanomboka ny andro feno herinaratra. Profesora mpiara-miasa amin'ny klinika iray avy amin'ny University of British Columbia, Dr. Kang dia hanome ny fehezantenin'ny Smart Monday. “Ho ahy, ny faritra sanganasa mahavariana indrindra sy ny lohahevitry ny asako dia ny siansa momba ny olombelona - ny fandalinana hoe iza isika ary ny antony ahatsapantsika sy hitondrantsika ny fomba fanaontsika. Amin'ny siansa, mahita valiny maro isika ary koa fitaomam-panahy handroso bebe kokoa amin'ny fikatsahantsika fahalalana, "hoy ny fanazavany. Manolotra ireo lesona farany momba ny siansa momba ny fahasalamana ara-tsaina, ny fahazakana, ny fitarihana ary ny fahombiazana, Dr Kang dia hanome "preskripsi" azo tsaboina amin'ny fikarohana izay azo ampiharina avy hatrany ho an'ny fahasalamana, ny fitiavam-panahy ary ny tanjona tsaratsara kokoa.
Dr. Shimi Kang, mpitsabo, mpanoratra ary mpandraharaha sosialy manerantany.
Ny lohan-doha dia manaparitaka ny volavolan-dalàna
Vaovao ho an'ny 2021 dia andian-dahatsoratra 'Headliners', mpandahateny misongadina rehetra eny an-tsahan'izy ireo. Izy ireo dia mitarika fandaharam-pianarana alohan'ny fampisehoana izay ahitana koa ny Forum Fihaonambe, ny Association Leadership Forum ary ny Me Means Business, hetsika iraisan'ny magazine IMEX sy TW, tohanan'ny MPI.
• Janet Sperstad, talen'ny mpampianatra ao amin'ny Madison College sy Guy Bigwood, talen'ny fitantanana ny hetsika fitohizan'ny tanjona maharitra dia hitarika fivoriana iray: Ny ho avy tadiavinay: mampikatso ny revolisiona miverina amin'ny laoniny. Izany dia hiorina amin'ny IMEX fikarohana niara-nanoratra izy ireo izay manazava ny toetran'ny habaka sy ny fomba fampidirana ireo fitsipiky ny toekarena boribory ho famolavolana hetsika.
• Ruud Janssen sy Roel Frissen mpanorina ny Event Design Collective dia mijery lavitra ny famolavolana hetsika. Amin'ny fotoam-pivorian'izy ireo, DESIGN hanova - Manatsara ny fahaizanao mijery sy manao zavatra mihoatra ny ankehitriny, hamoaka antso ho amin'ny fitaovam-piadiana hananana fomba fijery mifantoka amin'ny ho avy izy ireo.
• Ahoana raha miala amin'ny demografika ny mpikarakara ny hetsika ary mandray ny soatoavina maha-olona mba hamoronana hetsika tena matanjaka? Io no fanontaniana napetrak'i David Allison mpanorina ny Valuegraphics. Mampiseho ny antony mahatonga ny soatoavintsika - fa tsy ny demografika - izay mitondra sy mitaona ny fitondran-tena sy ny fanapaha-kevitra. Henoy ny resadresaka Podcast IMEX miaraka amin'i David Eto.
• Ny Headliner farany dia handray ny mpanatrika amin'ny dia any an-tany foana. Daniel Fox, mpikaroka tany, mpaka sary voajanahary, mpitia ny bibidia ary mpanoratra mizara ny zavatra niainany teny ivelany Ny lalàna mifehy ny FOX: Ny fotoanako tany an-tany efitra nampianariko momba ny fitantanana risika, tsy fahatokisana, fanovana ary ny fomba fampiharana ireo lesona ireo mba hananana fiainana be dia be kokoa.